१४ वर्षकी किशोरीमा १३–१४ दिनमै महिनावारी किन ? – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक १ गते १४:४६
म १४ वर्षकी किशोरी हुँ । मेरो महिनावारी अनियमित रूपमा १३–१४ दिनमै भइरहन्छ, जसले गर्दा मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको होला ?
वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
(निर्देशक, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल)
महिनावारी किशोरावस्थामा सुरु हुन्छ । प्रायः ११ देखि १४ वर्षको उमेरमा महिनावारी सुरु हुने गर्छ । सुरु–सुरुमा कतिपय किशोरीमा महिनावारी अनियमित हुने गरेको पाइन्छ । महिनावारीको २१ दिनभित्रमा पुनः महिनावारी भएमा त्यसलाई नर्मल मानिन्छ । महिनावारी भएको दिनदेखि गणना गर्दा २१ दिनभन्दाअघि नै महिनावारी भएमा त्यसलाई अनियमित मानिन्छ ।
धेरैजसो केसमा हर्मोनको गडबडीका कारण यस्तो हुने गर्छ । थाइराइड, प्रोल्याटिन हर्मोन, अधिक वा न्यून तौल, इन्फेक्सनलगायत कारणले महिनावारीमा गडबडी आउने गर्छ । फुल बन्ने प्रक्रियामा गडबडी भएपछि महिनावारीमा अनियमितता आउने गर्छ ।
अर्को कारण भनेको मेच्युरिटी नपुगेर पनि यस्तो हुन्छ । ब्रेनदेखि ओभरीसम्मको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम मेच्योर (नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र परिपक्व नभएसम्म) नहोउन्जेल महिनावारी नियमित हुँदैन । पहिलोपटक महिनावारी भएपछि १–२ वर्ष अनियमित महिनावारी हुन सक्छ, जुन मेच्युरिटी नपुगेर हो ।
महिनावारी अनियमित हुँदा धेरै दिन रगत जाने गर्छ । अविवाहित महिलालाई धेरै समस्या नभए पनि विवाहित महिलाको हकमा भने बच्चा बस्न ढिला हुनेजस्ता समस्या आइपर्छन् । छिटो–छिटो महिनावारी भएपछि रक्तअल्पता हुने हुन्छ ।
तपाईंको समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । महिनावारी अनियमित भइरहेको खण्डमा सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परीक्षण गराउनुपर्छ । परीक्षणका क्रममा कारण पत्ता लगेको अवस्थामा त्यहीअनुरूप उपचार गर्न सकिन्छ भने केही अवस्थामा कारण थाहा नहुन पनि सक्छ । समान्यतया यो समस्यामा औषधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।